Hisaorana anie Ilay avy...
Alahady 05 aprily 2020 — Ny nidiran'i Jesoa tao Jerosalema — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 1-11 — Ho antsika, dia nanolo-tena i Kristy hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny Hazofijaliana. Ho valin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra Izy : ary nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra.
Hisaorana anie Ilay avy... (Tenin'ny Tompo) 05/04/2020 04:00
Tsiky ao anatin'ny haizina  (Tantara) 04/04/2020 13:00
Voankazo nandrarana  (Tantara) 04/04/2020 08:40
Masindahy Isidore de Séville (Kintan'ny finoana) 04/04/2020 06:30
Talata 24 marsa 2020 — Herinandro fahefatra amin'ny Karemy — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 5, 1-16 — Amorony fo madio aho, ry Andriamanitra ; amereno ny hafaliana avy amin'ny vonjinao.
Manasitrana olona hafa indray i Jesoa, dia olona miandry kisendrasendra izay ahakasihany ny rano hetsiketsehan'ny anjely, narary efa hatramin'ny 38 taona. Endrik'ilay olombelona sasa-miandry famonjena izany, miaritra ny fangirifirian'ny aretina, mijaly fadiranovana anaty fahotana. Eo indrindra i Jesoa no tonga mamonjy, manasitrana, mampitsangana. Vonona isan'andro Andriamanitra ny hamonjy antsika, finoana sy fitokisana no andrasany amintsika dia tanteraka izany. Tsy finiavana te handika ny sabata akory ny an'i Jesoa raha nanasitrana amin'ny andro sabata, voarara rahateo moa izany satria andro fitsaharana io. Voarara ny asa azo atao, voafetra ny vesatry ny entana azo entina. I Jesoa manasitrana amin'ny andro sabata dia entina ilazana hoe izay mino an'i Jesoa Kristy dia afaka amin'ny lalana be didy fa miaina an-kalalahana ny maha zanak'Andriamanitra Ray azy. Tokony manova ny maha isika antsika sy ny fiainantsika manontolo ny fihaonana amin'i Jesoa. Maro mantsy ankehitriny ny sady mijoro ho kristianina fa mbola mino sy mitoky amin-javatra hafa koa ankoatra izany.
Avy teo i Jesoa, nanatona ilay olona nositraniny. Tsy sitrany mantsy ny hialokalofan'ilay voasitrana any anaty vahoaka any ; izany hoe mampanana ary mampisy fifandraisana manokana amin'i Jesoa ny fahasovana noraisina. Aoka tsy hialokaloka any anatin'ny betsaka isika fa hijoro amin'ny maha isika antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hijoro amin'ny anaran'ny tena manokana. Nafaran'i Jesoa ralehilahy tsy hanota intsony mba hitohy ny fahasoavana vao azony. Mba ho finaritra mandrakariva eo am-panompoana azy Tompo sy eo am-panarahan-dia an'i Kristy. Ny fihaonana amin'Andriamanitra mantsy antso ho masim-piainana mandrakariva. Amen.